Villa Galetta - I-Airbnb
Ist, Zadar County, i-Croatia
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Đino
I-Villa Galetta ingelinye lamafulethi esimanjemanje futhi abanzi esiqhingini sase-Ist. Indlu esanda kwakhiwa enengadi enkulu isendaweni enokuthula engamamitha angama-35 kuphela ukusuka olwandle. Ilungele imindeni noma amaqembu abangani njengoba ikwazi ukuhlalisa abantu abangafika kwabayi-8 kalula.
Ku-175 m2 ungathola amagumbi okulala ama-4, ikhishi elihlome kahle elinegumbi lokudlela, igumbi lokuhlala kanye namagumbi okugeza amabili aneshawa. Igumbi lokuhlala livula ithala elikhulu elinezihlalo, igrill yangaphandle kanye neshawa yelanga. Isici esikhethekile sale ndlu indawo enkulu yokudlala yezingane ezisezingeni eliphezulu. I-villa nayo ifakwe umoya ophelele.
I-Island Ist izokuhlaba umxhwele ngokudlidliza kwayo okukhululekile, ulwandle oluluhlaza kanye nobulula bokuphila okungatholakala kuphela ezindaweni ezimbalwa kulezi zinsuku.I-Villa Galetta iyindawo ekahle yokujabulela kukho konke lokho nezinye izinto eziningi ezinikezwa yi-Ist.